Chigadzirwa Dhizaini & Prototyping - Dongguan Chengda Rubber & Plastic Technology Co, Ltd.
Dongguan Chengda Rubber & Plastics Technology ndeye hunyanzvi hwetsika silicone zvigadzirwa & zvigadzirwa zverabha zvigadzirwa, inoshandira mukugadzira yakasarudzika silicone uye zvigadzirwa zverabha uye zvikamu.
Chigadzirwa Dhizaini Sevhisi:
Yedu yeinjiniya timu ine hupfumi dhizaini uye yekugadzira zviitiko kuti zviunze mazano ako kuve echokwadi, tora mukana neruzivo rwedu uye neruzivo kupfupisa nguva yako kumusika. Tinogona zvakare kugadzira chigadzirwa maererano nepfungwa yako. Kana iwe ukapa muyenzaniso, tinogona 3D scan muyenzaniso uye tora 3D dhizaini yechigadzirwa, uye ipapo tinogona kugadzirisa dhizaini zvichienderana nepfungwa yako.
Rapid Prototype Sevhisi:
Zvakare, kana iwe uchida kuona uye nekunzwa dhizaini yetsika yerabha zvikamu zvisati zvaumbwa zvekuumbwa, Chengda Rubber & Plastiki inogona kuburitsa inokurumidza prototypes iwe, tinogona kudhinda muyenzaniso ne3D kudhinda kana isu tinogona kugadzira sampuro muforoma uye yekunyepera masampula iwe.
Chengda Rubber & Plastiki yekutengesa timu ine moyo murefu uye iri nyore kutaura, munhu wedu wekutengesa anotora timu yeinjiniya kuti itange kutaurirana kwakadzika newe, kusanganisira chimiro, kushivirira, zvinhu, ruvara, basa uye nemutengo unoshanda, zvinokubatsira iwe kuwana yakakwana mhinduro yeako akajairwa silicone mapurojekiti kana etsika rabha mapurojekiti.